Antananarivo mibilaogy 4.0 sa ny ONG Foko? | Hevitra MPANOHARIANA
zahay moa mamaky fotsiny fa tsy afaka mifankahita ka misaotra e !
Nampidirin'i ikalamako @ 09:43, 2007-10-19 [Valio]
Misaotra manamafy ry Jentilisa a ! Hitako tokoa ny vaovaon'ny FOKO io ka irariana hiroborobo ny fitorahana ataontsika gasy rehetra e ! Ampariaho, ampariaho !
Misaotra amin'ny firariam-panaretana soa.
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 11:49, 2007-10-19 [Valio]
very be zà @ lé toerana ry jentlisia !!! hotrany lé ebit ihany io ê!!! Mahafinaritra lé mahita any olona rehetra mifankahita !
Nampidirin'i jogany @ 12:41, 2007-10-19 [Valio]
Misaotra an 'i Jentilisa tamin'ny famintinina ny resaka natao tany ee. Izahay moa na de teto an-toerana aza de sendran' ny tampoka, ka na efa nieritreritra ny handeha aza, de tsy tonga tampoka... Na izany aza nefa de tsy kivy satria, mbola misy ny @ 27 .
Nampidirin'i jf @ 15:17, 2007-10-19 [Valio]
Nihevitra aho fa nahita ny outbar isoraka voalaza etsy ambony sy nosoratan'ny "foko". Te-hanontany aho hoe nisy ihany ve ilay izy? Tonga teo amin'ilay cybersnack akaikin'ny sakamanga hotel io manko aho fa tsy mahalala ny fotoana sy ny Ong ilay tao.
Dia miala tsiny aho raha toa ka nisy ila izy satria tonga ara-potoana tsara aho fa tsy nahita na inona na inona no sady tsy nisy afisy ihany koa nanamarika ilay vanim-potoana
Nampidirin'i jentilisa @ 07:41, 2007-10-20 [Valio]
toa rahariva amin'ny 8 pm ilay izy raha ny fahafantarako azy satria 1 pm aty izahay miantso any amin'ny skype.
aza fady fa tsy nazava , Jentilisa an.
Nampidirin'i sipakv @ 13:21, 2007-10-20 [Valio]
Gaga be i jogany hoe fa maninona no toa ampifandrafesina ilay zavatra nosoratako.
Tsia fa fantaoko hanairana ilay izy ny tena marina
Nampidirin'i jentilisa @ 15:01, 2007-10-20 [Valio]
Tsy mifandrafy fa samy te hampandroso an'i Madagasikara daholo ka mifanampy sy mifameno ny zavatra atao. Manaitra tokoa aloha ilay izy e.
Nampidirin'i sipakv @ 16:14, 2007-10-23 [Valio]
Andeha holazaina hoe nifanojo tamin'ny fotoana ny fanapahan-kevitra fa nizara dia noho ny toerana!
Nampidirin'i jentilisa @ 06:54, 2007-10-24 [Valio]